को हुन् भरतपुर महानगरमा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार विजय सुवेदी ? | Nepal Ghatana
को हुन् भरतपुर महानगरमा एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार विजय सुवेदी ?
प्रकाशित : २७ चैत्र २०७८, आईतवार २०:४४
भरतपुर महानगरको मेयरमा एमाले नेता विजयी सुवेदी उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।
एमाले चितवन पार्टी कार्यालयमा आज भएको उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा सुवेदीलाई पोलिटव्युरो सदस्य देवी ज्ञवाली र एमालेका संघीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले समर्थन गरेका हुन् । सुवेदी एमाले चितवनका तीन पटक पार्टी नेतृत्व हाक्नुका साथै वाग्मती प्रदेशका पूर्वमन्त्री पनि हुन् । सुवेदी अहिले एमाले वाग्मती प्रदेश कमिटीका सचिव हुन् ।
चितवनको राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र विकासमा मेयरका उम्मेदवार विजय सुवेदीले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । जीवनलाई सधैं जनताको पक्षमा समर्पित गर्ने उनी अहिले प्रदेशको सांसद, मन्त्री बन्दै महानगरको मेयरको प्रतिस्पर्धामा मैदानमा उत्रिएका छन् । भरतपुर महानगरको मेयर निर्वाचित भएर देशकै नमूना शहर बनाउने अभिभारा एमालेले सुवेदीलाई सुम्पेको छ ।
सुवेदीले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन गरिएको धनधाञ्याञ्चल महायज्ञको संयोजक भएर काम गरे । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–११ को गणेशस्थानलाई गणेशधाम बनाउने भिजन पनि नेता सुवेदीकै थियो । उनी गणेशधाम संरक्षण र सम्वद्र्धन समितिका संरक्षक हुन् । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको अतिक्रमणको चपेटामा परेको नहरलाई व्यस्थित गरेर डुंगा सञ्चालन गर्ने सोच पनि सुवेदीले ल्याएका हुन् । दासढुंगामा मदन–आश्रित पार्क र जलमार्ग निर्माणको काम नेता सुवेदीकै सोच अनुसार डीपीआर निर्माण गरिएको छ । । सधै नागरिकको जीवन र जनसरोकारका विषयमा घुलमिल भएर काम गरिरहने सुेवेदी चितवनको आधुनिक विकासका अभियन्ता हुन् ।
‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन’ जननेता मदन भण्डारीको यो भनाइलाई व्यवहारमा उतार्दै राजनीति र सामाजिक काममा अनवरत रुपमा सक्रिय सुवेदी चितवनवासीका लागि नौलो नाम होइन । राजनीतिसँगै सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय सांसद सुवेदीले चार दशकभन्दा बढी चितवन र चितवनवासीको सेवामा बिताएका छन् । निष्ठाको राजनीतिलाई जीवन्तता दिँदै अगाडि बढेका सुवेदीले जति जनताको सेवा गरेका छन् । निस्वार्थ भावले गरे । यो आम चितवनवासीले प्रष्ट जानेको विषय हो ।
२०२० साल चैत ५ गते क्याकमी–४, चाङसिङ, स्याङ्जामा जन्मिएका सुवेदीले चितवनको माटोमा रहेर राष्ट्र, समाज र जनताका लागि धेरै पसिना बगाए । धेरै जेलनेल भोगेका उनले आन्दोलनको क्रममा रगत पनि बगाएको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
सांसद सुवेदीले त्रिविबाट अर्थशास्त्र र इतिहासमा स्नातक र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट बौंद्धशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी २०४७ सालमा एमाले चितवनको सचिवालय सदस्य भए । तत्कालिन अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका खेल्ने सचिव पद उनले २०४९ सालबाटै सम्हाले । नेकपा एमाले चितवनको २०४९–२०५०, २०६१–०६४ र २०६४–०६६ गरी तीन कार्यकाल सचिव बने । यो बीचमा २०५५ देखि २०५९ सालसम्म राष्ट्रिय परिषद् सदस्य भएर पार्टीको जिम्मेवारी सल्हाले । २०६७ सालमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य भएर पनि उनले पार्टीको कामलाई निरन्तरता दिए । अहिले नेकपा एमाले चितवन क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट वाग्मती प्रदेशका सांसद बन्दै भरतपुर महानगरको मेयरको उम्मेदवार बनेका सुवेदीले राजनीतिमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी सधैं सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् ।
आन्दोलनकारीको नेतृत्व गर्दै होमिएका उनलाई पटकपटक गरी ६ महिना जेल हालियो । २०४२ सालमा एक महिना हनुमान ढोका प्रहरी हिरासतमा यातना दिँदै राखियो । २०४५ सालमा चितवनमा गिरफ्तार गरी वीरगञ्ज लगेर दुई महिना १५ दिन र २०४६ सालमा पनि चितवनमा नै पक्राउ गरी वीरगञ्ज लगेर २ महिना १५ दिन जेल हालियो । यसबीचमा उनले अनेकन झुटा मुद्दाहरु व्यहोर्नु परेको थियो । आन्दोलनकै क्रममा २०४३ देखि २०४५ सालसम्म सुवेदीले चितवन र मकवानपुरमा भूमिगत जीवन बिताए ।
२०६६ सालमा जिल्ला विकास समिति चितवनले गठन गरेको चितवन उपत्यका गुरुयोजना निर्माण समितिको संयोजक भएर उनले जिम्मेवारी पूरा गरे । उनले २०६७ सालमा उक्त गुरुयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारी प्रस्तुत गरे । २०७४ सालमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ बाट वाग्मती प्रदेश सांसदमा अत्यधिक मतका साथ निर्वाचित मन्त्री सुवेदी सरलताका एक उदाहरण मानिन्छन् । उनको यात्रा चितवनको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लो ५० दिन वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा पनि उनले उल्लेख्य काम गर्न सफल भएका छन् ।
छ हजार ६ सय ६६ मतान्तरको अग्रता लिइन् रेनुले भरतपुरमा
कसले कति पाए मत भरतपुरमा ?